Semalt Ichaza Izinyathelo Eziphumelelayo Ukuqeda iThrojani-Dropper.Win32.ZomJoiner.241
iThrojani-Dropper.Win32.ZomJoiner.241 iyisimo esiyingozi seTrojan esitholiweukuba yingozi kuwo wonke amakhompyutha emhlabeni. Leli gciwane lisakazeka ngewebhu futhi lizenzele ngokuzenzekelayo kukhompyutha ngesikhathi kubasebenzisi 'imisebenzi enethiwekhi ye-intanethi njengokuvula ama-imeyili angaziwa, ukubuka amakhasi we-pornographic nokulanda i-freeware. The Trojan, onceefakiwe, kuthinta ikhompyutheni yokusingatha ngokuphazamisa ukungenelela namafayili wesistimu futhi nokwenza okusha ukwenza okubiukudideka esakhiweni. Ngesikhathi sokuhlasela, iTrojanese ihlukumeza ukuphuma kwamasistimu ukukhulula amakhodi amaningana ayingozi afana nawoi-malware, izibungu, i-spyware kanye ne-adware kwikhompyutha.
Ihhashi leThrojani liphazamisa ikhompyutha ngokunciphisa ukusebenza kwesistimufuthi kubangele ukuxhumeka kwenethiwekhi embi. Ekugcineni, ikhompiyutha ehambela phambili iholela kumafolda amaningi ngesikhathi sokuvala, ukuqala kanye nenquboukuqaliswa kohlelo olukhulu. Ngakho-ke, kuyimfuneko yabasebenzisi bekhompyutha ukususa i-Trojan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241 viruskusuka ku-PC yabo ngokushesha lapho itholakele. Ukuze uphumelele ekwenzeni lokhu, yehla ezitatimendeni ezishiwo uJulia Vashneva, oholayouchwepheshe kusuka Semalt .
Izinhlelo ze-antivirus ezihlukumezayo zihlukaniswa imizamo yabo yokuvela ngokomthetho futhingokuqinisekile ngangokunokwenzeka, kodwa uma sebesekhompyutheni yakho, izinkinga ezihlukene nezinkinga zenzeka futhi zingonakalisa uhlelo lwakho. AkuyonaKunconywa ukuthenga 'ukuthuthukiswa' kwegciwane ngoba abaduni basebenzise lokhu ukufinyelela ulwazi lwekhadi lesikweletu bese bevula i-akhawunti yasebhange.
Nendlela Susa Trojan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241
Ukuze ususe le gciwane, kuzodingeka uhlanze ngesandlaukususa wonke amafayela ahlobene negciwane noma ngokusebenzisa isofthiwe yokususa okuzenzakalelayo. Abaqali bokuqala abavunyelwe ukuzama ukususwa kwebhuku uma ngabekuhlanganisa ukuhlelwa kokubhalisa okubukhali kwekhompyutha. Kudingeka ukuthi ususe ngokucophelela amanani okubhalisa ahlobene neThrojaniigciwane, imise imisebenzi ekhishiwe, susa amafayela we-LNK ne-DDL abonakalisiwe, futhi ekugcineni ususe wonke amafayela namafolda axhunyiweigciwane. Iphutha kule nqubo yebhuku ingakudla okuningi ukulungisa iPC engasebenzi. Yingakho isofthiwe yokususa okuzenzakalelayo futhiukhethe amathuluzi amancane okususa abalulekile futhi anconywa kwabaningi ngoba isindisa isikhathi nemali njengoba ikhompiyutha izosebenza futhi.
Izinyathelo zokususa izincwadi
Ngezinye izikhathi uhlelo lokuphepha olufakwe kwikhompyutha yakho lungase luhluleke ukuqedaTrojan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241 virus. Kulesi simo, izinyathelo ezilandelayo zesebenzi zingasetshenziswa.
1. Sebenzisa umphathi we-Windows Task ukuqeda izinqubo ezihlobene.
2. Susa ama-virus registry amagugu usebenzisa umhleli we-Registry.
3. Ungalokothi ubhalise amafayela e-Trojan-Dropper.Win42.ZomJoiner.241 DDL usebenzisa i-Windows command prompt.
4. Thola futhi ususe amanye amafayela athelelekile.
Qaphela: Le gciwane iTrojan inezinqubo eziningana ezigijima ngemuva kwe-PCfuthi amafayela amaningi, ngakho-ke, ukususa iThrojani-Dropper.Win32.ZomJoiner.241 ngokuphelele, kufanele sonke isuswe enye igciwane izofakakanye ngokuzenzakalelayo. Kunconywa ukuthi kusebenze imodi ephephile ngenkathi ususa ngesandla i-Trojan igciwane ukuze ulondoloze ukubaluleka kokubhalisa okubalulekile.
Ngamafuphi, igciwane leTrojan lingalimaza kakhulu ikhompyutha kuze kulandwe ezinyeizinhlobo zegciwane njenge-brows-hijack redirect kanye nohlelo olunzima. Ezinye izisulu zingase zihlupheke lokhu kuhlaselwa ngesikhathi esisodwa. Ingavumela i-backdoorukufinyelela abagibeli ngenxa yezizathu ezinonya. Ukukhishwa kweThrojani-Dropper.Win32.ZomJoiner.241 kunconywa ukuba ubalekele okubiizinkinga kusukela i-antivirus ayikwazi ukusingatha isimo kahle.